October 11, 2021 - Khitalin Media
အမေ့စုအတွက် ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းစရာ သတင်း(မအလအဖွဲ့ ယုတ်မာပြီ)
October 11, 2021 by Khitalin Media
ကျန်းမာရေးအရနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ကြားနာစစ်ဆေးပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လျှောက်ထားမှု တရားရုံးလက်မခံ သဘာဝဘေးပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ အမှုကို စွဲချက်တင်ကြောင်းအမိန့်ချ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေကို တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ( နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်) စစ်ဆေးပေးဖို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုမှာ တရားသူကြီးထံကို စာတင်ပြတောင်း ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ပတ်တစ်ခါသာစစ်ဆေးမယ်လို့ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၁ရက် နေပြည်တော် အထူး တရားရုံး ကကြားနာစစ်ဆေးမှုမှာ တရားသူကြီးက အမိန့်ချခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ တခါ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ကို စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေထဲက အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း စစ်ဆေးလေ့ရှိတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ အမှုတွေ အတွက်လည်း အမှုကို စွဲချက်တင်ကြောင်း တရားရုံးက အမိန့်ချခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ အဲဒီပုဒ်မနဲ့ စွဲချက်တင်၊ မတင် … Read more
One Championship ရဲ့ ပါဝါအား နှင့် အကြမ်းဆုံး ဖိုက်တာ ဆုကို ရရှိသွားတဲ့ အောင်လ
One Championship ရဲ့ ပါဝါအား အပွငျးဆုံးနဲ့ အကွမျးဆုံးဆု ကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ရရှိခဲ့တဲ့ အောငျလအနျဆနျး လေ့ကငှ့ထွားတဲ့ MMA ကစားသမားတှတေောငွ အောငလွအနဆွနွးရဲ့ Kick Power Boxing Power တှကေို မခံနိုငကွှဘူး ဆိုတာ သူ ထိုးသတခွဲ့တဲ့ပှဲတှကေိုကှည့ရွငသွိနိုငပွါတယနွောွ။ အထူးသဖှင့ြ ဂပွနသြားကှီးကနဟြဆဲလဂြါဝါဆိုရငြ နံရိုးတှပေါကွိုးပှီး အတှငြးပိုငြး သှေးယိုစိမ့မြှုတှနေဲ့ အသကကြိုပါ မနညြးလုခဲ့ရတာဖှဈပါတယနြောြ။ အဲ့လိုအားပါပှငွးထနတွဲ့ ကနခွကှတွှေ တိုကခွိုကနွိုငစွှမွးတှေ နဲ့ကှောကရွှံစိတကွငွးမဲ့မှုတှကှေောင့ပွဲ ပရိတသွတအွခစှ တွောမွှနမွာ့စပါးအုံးကှီးကတော့ One Championship ရဲ့ ပါဝါအားအပှငွးဆုံး နဲ့ အကှမွးဆုံးဆုကို ထိုကထွိုကတွနတွနရွရှိ ခဒ့တာပဲဖှဈပါတယနွောွ။ ပရိတသြတကြှီးရေ မှနမြာပှညသြူတို့ရဲ့အခစွတြောြ နိုငငြံဂုဏဆြောငြ မှနမြာ ကိုကမျဘာကသိစခေဲ့သူ ကခငွသြားကှီး အောငလြအနဆြနြးကတော့ MMA လောကမှာ မသိသူမရှိလောကအြောငကြို အောငမြှငကြွောကြှားလှသူဖှဈပါတယ … Read more
ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၅) ခု
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် သစ္စာဆိုတာ သင်မတောင်းလည်း သူ့ဖက် ကနေပေးပြီးသားပါ။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူဟာ အခုဖော်ပြပေးတဲ့အချက်တော်တေ်ာများများနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့သင့်အပေါ် အရမ်းသစ္စာရှိ ပြီး ဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်တဲ့ ချစ်သူကို သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် သင်အရမ်းကံကောင်းပါတယ် (၁) ရည်းစားရှိတာကို ယောက်ျားလေးတွေရှေ့မှာဖုံးကွယ်မထားဘူး သူများတွေ၊အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေက သူ့ ကိုရည်းစားရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမျိုးမှာ ရှိတယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသားပြောပြရဲတဲ့ အပြင်ဘယ်သူဘယ်ဝါလို့ ပြောဖို့တောင် ဝန်မလေးတဲ့သူပါ။ ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါးစေတဲ့အပြင် သူ့ကိုတခြားကောင်လေးတွေ မကြိုက်တော့မှာမှန်း သူကောင်းကောင်းသိပါတယ် ဒါကြောင့်သင့်ချစ်သူက သင်နဲ့သူရဲ့ပတ်သက်မှုကို အခြား ယောက်ျားလေးတွေရှေ့မှာဘယ်တော့မှ မဖုံးကွယ်ဘူးဆိုရင် သင့် အပေါ်အရမ်းသစ္စာရှိလို့ဆိုတာကို သဘောပေါက်လိုက်ပါ (၂) သင့်ကိုလျှို့ဝှက်ထားတာ မရှိဘူးသင့်ချစ်သူဟာ သင့်ကို ဘာမှလျှို့ဝှက်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး သူ့ရဲ့အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေ၊ အတွင်းရေးကိစ္စတွေက အစ သင့်ကိုတိုင်ပင် တယ် ရင်ဖွင့်တယ်၊ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မသိတာမရှိ … Read more
အပျိုဖော်ဝင်စ မိန်းခလေးငယ်လေးများကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်
အပျိုဖော်ဝင် စငယ်သွေးကြွလှပ ဆိုသောစကားသည် မိန်းခလေးတယောက် အပျိုစဖြစ်စတွင် လှပမူကိုတင်စားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ မိန်းခလေးငယ် တစ်ယောက် အပျိုစဖြစ် စသော ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်း လဲမူကို သိထားသင့်သော အချက်များကို OnDoctor တွင် အမေးများလေ့ရှိ ပါတယ်။ မိဘများအနေဖြင့် လည်းမိမိသမီးငယ် ကို ပြောင်းလဲလာသော လူနေမူပတ်ဝန်း ကျင်စိတ်မချ မူကြောင့် အပျိုဖော်ဝင် သည့်အချက် များကို စောစီးစွာ သတိထားသိချင်သော ဆန္ဒကြောင့် မေး ကြပါတယ်။ (1)အပျိုစဖြစ်သောအသက်အရွယ် မိန်းခလေး တစ်ယောက်အနေဖြင့် အသက် ၈နှစ်မှ ၁၃နှစ်ကြား အပျိုစဖြစ်ပါတယ် ။ အဝလွန်သောမိန်းခလေးများ အပျိုစ ဖြစ်သော အသက်အရွယ်စောလေ့ရှိပြီး ပိန်သော မိန်းခလေးများသည် နောက်ကျလေ့ရှိပါတယ်။ အသက်၁၂နှစ်အရွယ်တွင် ရင်သားဖွံ့ ဖြိုးမူမရှိဘဲ အသက်၁၅နှစ် ထိရာသီလာ … Read more
ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေ ကံနိမ့်တယ်လို့ခံစားနေရရင် ဒီနည်းလမ်းလေး သုံးကြည့်ပါ
အညှိများပယ် အနှောင့်များကင်း ဆား၂ဆုပ်အစီရင်….စိတ်မကြည်ဘူး မလန်းဆန်းဘူး စိတ်တွေထိုင်းမှိုင်းနေတယ် ဘာလုပ်လုပ်အဆင်ပြေမနေဘူး။အနှောင့်အယှက် အဟန့်အတားတွေလည်းများနေတယ် ။ လာဘ်ပိတ်နေတယ်…အရောင်းအဝယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ယုတ်စွအဆုံး ဘုန်းကံနိမ့်နေတယ်လို့ စိတ်ကခံစားရရင်သေချာတယ် သင့်မှာ အံ့မိတာ အညှိတင်နေတာ အပ အညံ့ အခိုက်တွေများနေတာ၊ အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေ တွေ့ကြုံခံစားနေခဲ့ရင် အစစအရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ထိရောက်တဲ့ဂ မ္ဘီရအစီရင်လေးတခု ဒါနပြုပါ့မယ်…။ မိမိလက်၂ဖက်… ညာလက်မှာဆားတဆုပ် ဘယ်လက်မှာဆားတဆုပ် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီးသက်သောင့်သက်သာစွာ ထိုင်ပါ။ပြီး လျှင် မိမိစိတ်ထဲက လေးနက်စွာ အာရုံပြုဆန္ဒပြုရမှာကမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာ အညှိတင်နေတဲ့ အံ့မိတာတွေ မကောင်းတဲ့အပ အညံ့ အခိုက်တွေကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဆားတွေက စုပ်ယူနေတယ် ဆိုပြီး အာရုံပြုနေရပါ့မယ်။ ၅မိနစ်လောက် ဆုပ်ကိုင် အာရုံပြုပြီးရင်တော့ လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဆားတွေကိုအဆင်ပြေရာ စွန့်ပစ်ပြီး…လက်ကို သေချာသန့်စင်အောင် ဆေးကြောရပါ့မယ်။ ၃ရက်ခြား ၁ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ…။၃ကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်ပြီးရင်ကိုသိသိသာသာ အစစအရာရာ … Read more
ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာလေးတစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ် ဆယ်လီ နေဆန်း
ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ လေးနဲ့ သာယာ လှပ တဲ့ ကမ္ဘာလေး တစ်ခု တည် ဆောက်တော့မယ့် ဆယ်လီ နေဆန်း မဂ်လာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ …ဖေ့စ်ဘုတ် ဆယ်လီနေဆန်း ကတော့ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့..ဟာသ လေးတွေ တင် ဆက်ရင်း လူသိများ လာခဲ့ တဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ လှပ တဲ့ မျက်နှာ အမူ အရာ အပြောအဆို တွေ ကြောင့် လူ အများရဲ့ အားပေးမှု ကိုပိုင်ဆိုင် ထားသူ တစ်ယောက် ပဲဖြစ် ပါ တယ်။ ထို့ပြင် နေဆန်းက ပရိ သတ်တွေ အားပေး မှုကြောင့် ရရှိ လာခဲ့တဲ့ ဝင် ငွေများဖြင့် … Read more
ဆံပင်အရှည်ထားတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းသတိထားရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာ ၇ ခု
ဆံပင်အရှည်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ကိုယ့်ဆံသားကျန်းမာလှပစေဖို့ သတိထားရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အရာ ၇ ခုကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Plastic ဘီးတွေနဲ့ဖြီးတာကိုရှောင်ပါ Plastic ဘီးတွေနဲ့ ခေါင်းဖြီးတာက ဆံသားငြိပြီးရှုပ်တာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆံပင်အရှည်ထားတဲ့သူတွေ ဆို ခေါင်းဖြီးရင်ပိုဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးကတော့ သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဘီး (သို့) ceramic brush နဲ့ဖြီးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြင်းတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကိုရှောင်ပါ ပြင်းတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကိုသုံးတာက ဆံသားအဆီဓာတ်ဆုံးရှုံးစေပြီး ဆံသားပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က ဆံပင်ရှည်တယ်ဆို ဆံသားလှအောင် ပိုဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသေချာရွေးသုံးပြီး နောက်ကနေ conditioner သုံးပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ဆံပင်ကိုအနောက်လှန်မဖြီးပါနဲ့ ဆံပင်ကိုအနောက်လှန်ဖြီးတာက အုံထူတဲ့သူတွေ၊ ဆံပင်ပါးပြီး ဆံလုံးသေးတဲ့သူတွေ၊ ဆံပင်ရှည်တဲ့သူတွေဆို ဆံပင်ငြိတာ၊ ရှုပ်ထွေးပြီးကျွတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်ကို အနောက်လှန်မဖြီးပါနဲ့။ ဆံပင်နှစ်ခွတွေကိုမညှပ်ပဲမထားပါနဲ့ ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်တာတွေကို … Read more
#ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့တူတဲ့မိန်းမ ++++++++++++++++++% ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့ တူတဲ့ဖြူစင်တဲ့ မိန်းမတွေဟာလစ်လျူရူခံရတာများပါတယ်။ရေသန့်ဟာ အရသာကင်းမဲ့ပြီးအရောင် အဆင်း မရှိတတ်ပါဘူး ။ရေဟာ ဖြူစင်ပါတယ်။မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုတောင်စင်ကြယ်အောင် ပံ့ပိုးလျှော်ဖွတ်ပေးနိုင် ပါတယ်။*** ဒါပေမယ့် ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့တူတဲ့မိန်းမတွေရဲ့တန်ဖိုးကို နားမလည်ကြပါဘူး။အရောင်အဆင်း အနံ့အရသာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေ တဲ့အချိုရည်လို မိန်းမတွေကြတော့ဂရုစိုက်ခံရတာများပါတယ်။သူတို့ရဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့ အရသာဟာလူတွေကိုစွဲဆောင်မှု တစ်ခုတော့ ပေးပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ဒီအချိုရည်တွေသောက်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာပါးစပ်ချဉ်တတ်ကြတာကိုတော့သောက်သုံးဖူးသွားတဲ့သူတိုင်း သိကြပါ တယ်။ အမြဲလိုလိုမရှိမဖြစ် ရေကိုသောက်သုံးရပြီး ရေဟာမရှိမဖြစ်ဆိုတာလည်း သိကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် လွယ်လွယ်နဲ့ရနေတဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုတော့တန်ဖိုးမထားတတ်ကြပါ ဘူး။ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေကလဲရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့တူပါတယ်အရောင်အဆင်းမရှိပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိပါ တယ်။ ပေါ့ပျက်ပျက်အပေါစားဆန်တဲ့ မိန်းမတွေကတော့အချိုရည်လိုပါပဲ။သူ့တို့ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းမရှိပဲအရောင် အရသာနဲ့ သာဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။တန်ဖိုးတော့ မရှိပါဘူး။ သင့်လက်ထဲမှာရောရေသန့်တစ်ခွက်ရှိနေပီလား…????ရေတစ်ခွက် လက်၀ယ်ပိုင်ဆိုင်ရနေပြီဆိုလည်းသင်တန်ဖိုးထားပါ။ ***#Credit to original writer. မူရင်းစာရေးသူအား လေးစားစွာဖြင့် credit ပေးပါသည်။ #ေရသန္႔တစ္ခြက္နဲ႔တူတဲ့မိန္းမ ++++++++++++++++++% ေရသန္႔တစ္ခြက္နဲ႔ တူတဲ့ျဖဴစင္တဲ့ … Read more
သိပ် မကြာခင် ကျရောက်တော့မယ် သီ တင်း ကျွတ် ကာ လလေးအတွက် အမှတ် တရ ဖြစ်စရာလေးတွေကို ဖန်းတီးတင်ဆက်လာတဲ့ နော်ဖော်အယ်ထား
နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလေးလား ထင်မှားရလောက်အောင် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နော်ဖော်အယ်ထားကိုတော့ပရိသတ်ကြီး ချစ်ကြ မယ်ထင်ပါတယ်။သူမရဲ့ ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေကပဲ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တွေကို ပိုစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဝင်းဥတဲ့ အသားအရည်လေးရယ် သွယ်လျကျစ်လစ်ပြီး အဆီပိုမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေးတိုင်း အားကျနှစ်သက် ချစ်ခင်နေရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြွေရုပ်လေးလို့ ထင်မှားရလောက်အောင် ဖြူဝင်းလှပနေသူလေးမို့ မိန်းကလေးပရိသတ်အချို့ အားကျချစ်ခင်နေရခြင်း လည်းဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာလည်း မကြာခင်ကျရောက်တော့မယ့် သီတင်းကျွတ်ကာလလေးအတွက် အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖန်တီး ရိုက်ကူးကာ ဖေ့ ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပုံလေးထဲမှာ နော်ဖော်တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ” ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ကာလအချိန်အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ တလုံးတဝတည်း ပြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…” ရေးသား ဆုတောင်းထားပေးရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ crd နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလေးလား ထင်မှားရလောက်အောင် … Read more
ပြည်သူ့မင်းသားချောလေး ဒေါင်းသီဆိုထားသည့်နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ “အောင်ပွဲတေး”(ရုပ်သံဖိုင်)
ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်…တို့သမိုင်းတို့ရေး…တို့အရေးတို့လက်မှာ…အောင်ပွဲဟာရှေ့မှာလက်တကမ်းရဲ့အနီး…အနိုင်စိတ် ကိုမွေးထား…လူတိုင်းညီမှ…အကုန်လုံးပါမှ…အမှောင်ထဲကလွတ်မှာပါ…ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်အရေးပါပဲ…မမေ့လိုက်နဲ့ ကွာ”ဒါကတော့မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတထောင့်တနေရာကပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းသီဆိုတဲ့“အောင်ပွဲတေး”သီချင်းထဲကတေးသွားစာသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဘောလုံး သမားဟောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်လောကထဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဒေါင်းဟာပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လေ့ရှိသူတဦး ဖြစ်သလိုခုတခါမှာလည်းကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေစစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးတို.က်ပွ.ဲဝင်နေသူဖြစ်တာမို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရသူဖြစ်ပါ တယ်။“စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့…အားမလျှော့ပါနဲ့…အကုန်လုံးနိုးကြား…အကုန်လုံးတွန်းကြ…ပြည်သူ့များရဲ့အား…တို.က်ပွ.ဲရှိမှ အောင်ပွဲရှိမှာ…စိတ်ထဲစွဲမြဲထား…အမှန်တရားဘက်ကငါတို့ရပ်ကြ…အကြော.က်တရားမေ.ာင်းထုတ်ပါ သေချာတယ်…ရောင်နီလာပြီ…အောင်လံထူမည်…တွေဝေစရာမရှိ…အဆုံးသတ်တို.က်ပွ.ဲပါ”မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ကစတင်ကာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကမတရားအာဏာသိ.မ်းယူခဲ့တာကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလဟာ၈လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေအတွင်းအကြ.မ်း ဖ.က်ြ.ဖိုခွ.င်းမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ကျဆုံ.းရသူတွေ၊ဖ.မ်းဆီ.းထော.င်ချခံရသူတွေနဲ့အတူနိုင်ငံအဝန်းတောရောမြို့ပါမ ကျန်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြား တို.က်ပွ.ဲတွေလည်းပြ.င်းထ.န်နေတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ကတော့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးခုခံ တွာန်းလှန်စစ်စတင်ကြောင်းနဲ့ မငေအာငလှိုင်ဦ.းဆောင်တဲ့အကြမ်.းဖ.က်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလှည်းနေလှေအောင်းမြင်းဇော.င်းမကျန်တွ.န်းလှန်တို.က် ဖျ.က်ကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ၇ရက်ကကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်…တို့သမိုင်းတို့ရေး…တို့အရေးတို့လက်မှာ…အောင်ပွဲဟာရှေ့မှာလက်တကမ်းရဲ့အနီး အနိုင်စိတ်ကိုမွေးထား…လူတိုင်းညီမှ…အကုန်လုံးပါမှ…အမှောင်ထဲကလွတ်မှာပါ၊ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်အရေးပါပဲ၊မမေ့ လိုက်နဲ့ကွာ”ဆိုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ြ မန်မာပြည်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က နေအမြန်ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ခရက်ဒစ်SAI unicode “ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်…တို့သမိုင်းတို့ရေး…တို့အရေးတို့လက်မှာ…အောင်ပွဲဟာရှေ့မှာလက်တကမ်းရဲ့အနီး…အနိုင် စိတ်ကိုမွေးထား…လူတိုင်းညီမှ…အကုန်လုံးပါမှ…အမှောင်ထဲကလွတ်မှာပါ…ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်အရေးပါပဲ…မမေ့လိုက်နဲ့ ကွာ”ဒါကတော့မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတထောင့်တနေရာကပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းသီဆိုတဲ့“အောင်ပွဲတေး”သီချင်းထဲကတေးသွားစာသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဘောလုံး သမားဟောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်လောကထဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဒေါင်းဟာပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လေ့ရှိသူတဦး ဖြစ်သလိုခုတခါမှာလည်းကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေစစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးတို.က်ပွ.ဲဝင်နေသူဖြစ်တာမို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရသူဖြစ်ပါ တယ်။ “စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့…အားမလျှော့ပါနဲ့…အကုန်လုံးနိုးကြား…အကုန်လုံးတွန်းကြ…ပြည်သူ့များရဲ့အား…တို.က်ပွ.ဲရှိမှအောင်ပွဲ ရှိမှာ…စိတ်ထဲစွဲမြဲထား…အမှန်တရားဘက်ကငါတို့ရပ်ကြ…အကြော.က်တရားမေ.ာင်းထုတ်ပါ သေချာတယ်…ရောင်နီလာပြီ…အောင်လံထူမည်…တွေဝေစရာမရှိ…အဆုံးသတ်တို.က်ပွ.ဲပါ”မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ကစတင်ကာ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကမတရားအာဏာသိ.မ်းယူခဲ့တာကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလဟာ၈လ ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေအတွင်းအကြ.မ်းဖ.က် ြ.ဖိုခွ.င်းမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ကျဆုံ.းရသူတွေ၊ဖ.မ်းဆီ.းထော.င်ချခံရသူတွေနဲ့အတူနိုင်ငံအဝန်းတောရောမြို့ပါမကျန် ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတို.က်ပွ.ဲတွေလည်း ပြ.င်းထ.န်နေတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ကတော့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးခုခံတွာန်းလှန်စစ်စတင် ကြောင်းနဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ဦ.းဆောင်တဲ့အကြမ်.းဖ.က်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလှည်းနေလှေအောင်းမြင်းဇော.င်းမကျန်တွ.န်းလှန်တို.က် ဖျ.က်ကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ၇ရက်ကကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။“ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်…တို့သမိုင်းတို့ရေး… တို့အရေးတို့လက်မှာ…အောင်ပွဲဟာရှေ့မှာလက်တကမ်းရဲ့အနီး အနိုင်စိတ်ကိုမွေးထား…လူတိုင်းညီမှ…အကုန်လုံးပါမှ…အမှောင်ထဲကလွတ်မှာပါ၊ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်အရေးပါပဲ၊မမေ့ လိုက်နဲ့ကွာ”ဆိုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က နေအမြန်ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ crd